कोरोना त्रास : यी व्यक्तिले वासिङ मेसिनमा धोए २२ लाख बढी रकम ! « Nagarik Khabar
कोरोना त्रास : यी व्यक्तिले वासिङ मेसिनमा धोए २२ लाख बढी रकम !
एजेन्सी । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले नेपालसहित विश्वभर कोलाहल मच्चाइरहेको छ । पुरै विश्व कोरोनासँग युद्ध लडिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एक व्यक्तिले कोरोना संक्रमणबाट बच्न आफूसँग भएको पैसा मेसिनमा धोएका छन् ।
दक्षिण कोरियाका एक व्यक्तिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न पैसालाई धोएका हुन् । सियोल नजिकै अन्सास सहरमा बस्ने एक व्यक्तिले संक्रमणबाट बच्न आफ्नो सबै पैसा वासिङ मेसिनमा धोए । त्यसपछि माइक्रोवेभ ओभनमा सुकाए ।
तर ओभनमा सुकाउने क्रममा केही नोटहरु जलेका थिए । उनले नेपाली २२ लाखभन्दा बढी रकमलाई धोएका थिए । उनको यस कदमले सबैजना आश्चर्यमा परेका छन् । नोटलाई भाइरस मुक्त बनाउनका लागि उनले यसो गरेको बताएका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
धुने क्रममा नोटमा क्षति पुगेपछि ती व्यक्ति नोट बदल्नका लागि बैङ्मा पुगे । बैङ्क अफ कोरियाले क्षतिग्रस्त नोट साट्न सकिने बताएपछि उनलाई केही राहत मिल्यो । बैङ्कले उनलाई सबै धोएको नोटको बदलामा १९ हजार ३ सय २० डलर भुक्तानी दियो ।
केही नोटहरु प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेकाले उनले आफूसँग भएको भन्दा कम पैसा भुक्तानी पाए । बैङ्ककाअनुसार यस्तो अवस्थामा बैङ्कलाई घाटा कम छ भने बैंकले नयाँ मुद्रा प्रदान गर्न सक्दछ ।
ट्रम्पद्वारा फ्लोरिडामा “पूर्वराष्ट्रपतिको कार्यालय” स्थापना
एजेन्सी । अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो गृहराज्य फ्लोरिडामा “पूर्वराष्ट्रपतिको कार्यालय” स्थापना गरेका छन्